Mercury uchungechunge High Frequency Rack UPS inikeza Rack / Tower Isici sefomu ukuze uvumelane imvelo ahlukahlukene. Ideal for ukuvikelwa amandla aphakathi kwabantu ngokufunwa, Naphezu lokungcolisa yayo compact, lokhu UPS sihlanganisa ibhethri amaphakethe yangaphakathi okuyinto lungatholakala nge front panel sesondlo amasheke esikhundleni ngaphandle kokukhipha UPS kusukela yokubeka yayo obandayo. I-LCD ukubonisa panel kungenziwa kalula sigudluke ngokucindezela izinkinobho ukuze ivumelane ifomethi ukufakwa, zibheka zime noma yaphetha adala entabeni. Ngaphandle kwalokho, izisebenzi IT ungaphatha imishini kahle ngokufunda asele Imininingwane isikhathi isipele nge-LCD isibonisi.
Nge kweqiniso kabili ukuguqulwa design, Mercury uchungechunge inikeza isivikelo esinamandla futhi jikelele kumadivayisi wakho ebucayi. Kungaba ukwamukela voltage ebanzi yokufaka ndawo ebandayo. Kuyinto Ukuvikelwa ephelele amaseva yakho eyigugu kanye workstations.
2. Pure sine wave okukhipha
Nge okumsulwa sine wave okukhipha, iqinisekisa kwedivayisi zonke izinhlobo imithwalo. Its Ukuvikelwa ephelele amandla izinhlelo zokusebenza enemisebenzi ezifana zokuxhumana, Telecom nezinye izinhlelo zokusebenza-esibucayi mission.
Mercury uchungechunge usengakwazi ukunikeza amandla saka amadivayisi axhunyiwe ngaphansi engazinzile amandla ezindaweni.
5. lokukhipha amandla isici 0.8
Ngokuqhathaniswa UPS inthanethi emakethe wamanje, Mercury uchungechunge UPS inikeza amandla kangcono okukhipha factorup ukuba 0.8. It linikeza ukusebenza ephakeme kanye effciency izinhlelo zokusebenza ezibucayi.
6.ECO imodi wokusebenza kwagezi
7. eziphuthumayo Amandla Off (EPO) Umsebenzi
8. USB + RS232 + RJ45 + SNMP zokuxhumana amaningi ngoba 1-3K onobuhle
• humanized panel ukubonisa futhi turnable LCD screen
Front lwamapulangwe LCD screen, ukubonisa ngokuzibonela ngendlela izibalo kanye ihluzo njll, LCD screen ungakwazi azungeze ngokukhululekile, futhi LCD ukubonisa uhambisane kokubili ukufakwa Tower uhlobo noma Rack ukukhwezwa uhlobo UPS.
• Rack / Tower Uhlobo Design
Imodi ukufakwa Racks futhi umbhoshongo ups kungaba usuke kokubonisana nomkayo, I iziphanyeko ngoba Racks kanye stents ngoba umbhoshongo ups kukhona standard okungahleliwe edingekayo, kulula ngokukhetha abasebenzisi.
100% ~ 110%: isixwayiso ezwakalayo
110% ~ 130%: UPS amvalele phansi emasekhondini angu-60 e-mode noma ukudlulisa ibhethri ukundlula lapho Umbuso kungokwemvelo
> 130%: UPS amvalele phansi ngokushesha imodi noma ukudlulisa ibhethri dlula imodi lapho Umbuso kungokwemvelo
≦ 3% @ 100% Linear Layisha; ≦ 6% @ 100% Layisha Non-eqondile
4 ema-awa alulame ku-90% umthamo
1.0 A (ubuningi.)
0 ~ 40 ° C (umjikelezo ukuphila kwebhetri uzobe unciphise lapho izinga lokushisa ngenhla 25 ° C)
<95% futhi okungezona ushintsha uba yileli
Previous: 10-20KVA High Frequency Rack UPS (3: 1) esilandelayo:20KVA-210KVA Modular UPS